Myanmar Literature Talk Dec52010 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » Myanmar Literature Talk Dec52010
Myanmar Literature Talk Dec52010
Posted by mandalay1875 on Dec 13, 2010 in Cultures, News, Opinions & Discussion | 16 comments
Burmese Writer KhetMar MaungSwanYi MayNyein Myanmar
Myanmar writers speech event in Los Angeles Khet Mar <<< mp3 အား Download လုပ်ရန်
Myanmar writers(U Swun Yi) speech event in Los Angeles <<< mp3 အား Download လုပ်ရန်
May Nyein LA Dec52010 <<< mp3 အား Download လုပ်ရန်
Win Pe LA Dec52010 <<< mp3 အား Download လုပ်ရန်
ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ပေးတဲ့ visiono ကိုကျေးဇူးစကားလေးရေးပေးပါနော်။
Website ရဲ့ frontpage မှာ၂ပတ်လောက်ဆက်တိုက်တင်ထားပေးရင်ကောင်းမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား front page မှာ(၁)လလောက်တင်ထားပေးနိုင်၇င်ကောင်းပေါ့ဗျာ။
You Tube က ကြည့်မရပါ … တခြားအသံဖိုင်နဲ့ တင်ပေးနိုင်လျင် ပိုကောင်းပါမည် …
mp3 တွေပြောင်းပြီး မန္တလေးဂေဇက်မှာပဲတင်လိုက်ပါတယ်..။ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူနိုင်ကြပါတယ်..။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောထားတာတွေပါ..။ ဦးဝင်းဖေပြောတဲ့အထဲ …မြို့ မငြိမ်းအကြောင်းလေးတွေတောင်ပါရဲ့..။
လေးခိုင် ဘယ်နားသွားဒေါင်းရမလဲ ကျနော်မသိလို့ဗျ !!
အပေါ်က ..စာထဲမှာပဲ.. <<< mp3 အား Download လုပ်ရန် ဆိုပြီး ပေးထားတယ်လေ..။ မမြင်ရဘူးလားမသိ..။ နားထောင်ပြီးလို့ ... အသံအခြေအနေ... အဆင်မပြေရင်လည်း ပြောနော..။
အူးခိုင်ရေ.. ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ လင့်ကို မရှိတာ.. ပြန်စစ်ပါအုန်း..
ချောတီး အူးခိုင်ရေ.. တွေ့ပြီ.. ဒါပေမဲ့.. အသံကလေး မင်… ဂ.. လာ ပါ ဆိုပြီး ရပ်သွားတာဘဲ.. ဆန့်ကင် ဆန့်ကင်နဲ့
အဲဒီအောက်နားလေးမှာ .. လင်ါခ်တခုရှိတယ်.. ကလစ်လုပ်လိုက်ရင်.. တိုက်ရိုက်နားထောင်မလား..။
Myanmar writers speech event in Los Angeles [Download]
ဒေါင်းချင်ရင်.. [Download] ကို ရိုက်ကလစ်လုပ်ပြီး .Saveလိုက်ယုံပါ..။
အသံကြည်ပါတယ် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ကျေးဇူးစကားလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျေးဇူးစကားကြီး ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်က ဆရာဝင်းဖေ ကိုသိတ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ။ သူရေးခဲ့တဲ့ ၀တ်ထု တိုလေးတွေကို အခု ပြန်ဖတ်ချင်နေလို့ တစ်လက်စတည်း ကူညီနိုင်ရင်ကူညီကြပါဦး။ မျက်မှန်၊ ဦးနှောက်ထဲရောက်ပုရွဲဆိတ်၊ ချက်ကြီးအတွက်အရက် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ဘို့ပြင်ဆင်ထားပါ့မယ်။
Thanks share Mp3 file.
ဆရာကြီး။ဆရာမတွေဆီ ဝေဖန်စာကောင်းကောင်းလေးတွေ (ဆိုရင်)ပြန်ပို့ ပေးပါ့မယ်..။
အနည်းဆုံးတော့ ဦးဝင်းဖေရဲ့ မြို့ မငြိမ်းကို မန္တလေးသားတွေအမြင်သိချင်သား…။
မခက်မာရဲ့ အဖွားမေတ္တာကိုနားထောင်ပြီး ကျွန်မနဲ့ခံစားချက်အနည်းငယ်ဆင်လို့ မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ် … သူ့စေတနာ တစွန်းတစကို သိလိုက်ရလို့လဲ အထင်ကြီးလေးစားမိပါတယ် … ဟာသမပြောတတ်ပေမယ့် စကားပြောကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် …
ဆရာမောင်စွမ်းရည်ပြောတဲ့ လူထုဦးလှအကြောင်းကလဲ ဗဟုသုတရော အတုယူစရာတွေရော အပြင် ရသတစ်ခုကိုပါ ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်မက ငယ်စဉ်ကထဲက စာဖတ်တာအရမ်းဝါသနာပါလို့ သမိုင်းတွေ ၀တ္ထုတွေကိုရင်းနှီးခဲ့ဖူးတော့ အခုနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာ အတော်အားရကျေနပ်ဖြစ်မိပါတယ်။ အမျိုးသားနေ့ဆိုတာကလဲ ကျွန်မအလယ်တန်းကထဲက စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ပြိုင်ခဲ့ရလို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် အဆက်ပြတ်နေခဲ့တာကြာပြီး အခုလို ပြန်ကြားလိုက်ရချိန်မှာ ကလေးဘ၀ကိုရော အမျိုးသားနေ့ကိုရော အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ပါ ပြန်လည်နိုးကြားလို့ ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ဆရာမ မေငြိမ်းပြောတာကတော့ နားထောင်လို့ကောင်းပေမယ့် နားထောင်ရတာ မောလိုက်တာလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့စေတနာတွေများလွန်းလို့ စကားပြောလောကြီးနေတာလို့ နားလည်မိပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ မြန်မာစာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ခံယူချက်နဲ့ အနုပညာကို ခံစားနားလည်မိပါတယ်။ အနုပညာရဲ့ အရေးပါပုံကို အခုထိ ပညာရေးမှာ ထည့်သွင်းပြဌာန်းတာမရှိတာကလဲ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ လူငယ်တွေကို အလေးပေးတဲ့ ဆရာမရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်။ ဆရာမပြောသလို မိဘတွေများများရှိရင် ကောင်းမှာပဲလို့ ဆန္ဒဖြစ်မိပါတယ် …
ဆရာဦးဝင်းဖေကတော့ အထူးပြောစရာကိုမရှိပါဘူး … ဘီဘီစီက ၀င်းဖေလွယ်အိတ်ကို နားထောင်နေကျမို့လို့ လေယူလေသိမ်းနဲ့ သဘောတရားကို နားလည်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ် … ဆရာကြီးက ငွေကို စာစီစာကုံးရေးတဲ့အကြောင်းပြောပြတာ ရီစရာလဲကောင်းသလို ဆရာကြီးရဲ့ အတွေးကိုလဲ ချီးကျူးမိပါတယ် … မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါကိုတောင် သီချင်းလုပ်ဆိုတဲ့ ဆရာမြို့မငြိမ်းတို့ခောတ်က အနုပညာကိုတော့ လေးစားလို့ မဆုံးပါဘူး … ဆရာဦးဝင်းဖေရဲ့ အပြောကောင်းမှုကြောင့် စိတ်ညစ်နေချိန်မှာ ရယ်လိုက်ရလို့ ဆရာ့ကို အထူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ….
အခုလို MP3 ဖိုင်တွေ တင်ပေးတဲ့ မန္တလေးဂေဇက်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း …..